Zvekare isu tinogona kupa mari zvigadzirwa zveApple pasina mubereko | Ndinobva mac
KuApple ivo vatove kufunga nezvekutengesa uye izvi zvinoonekwa mukusimudzira kwakaitwa zvakare mazuva mushure mekuratidzwa kwemamodeli matsva e iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, Apple Watch Series 5 uye yakavandudzwa 10,2-inch iPad.
Iyo Cupertino kambani, sezvaungaverenga mumusoro wenhau, zvakare yakamutsa kusimudzira kwekutenga muzvikamu pasina mubereko. Mutengo wekubhadhara icho chigadzirwa kana tikadaro mumwedzi gumi nemiviri kana pasi Izvo zvakafanana nekunge isu tichiibhadhara nemari, saka zvakafanira kuona iyi sarudzo kana tisina huwandu hwemari inodhura zvigadzirwa izvi.
ZveMac, iPhone, iPad, Apple Tarisa ...
Uye muchidimbu, kune zvese zvigadzirwa zvavanazvo pawebhusaiti zvine yakaderera odha huwandu hwe299 euros. MuApple ivo vari pachena kuti kuisa urwu rudzi rwekubhadhara "zvivakwa" zvinogona kugara zvichikuunzira huwandu hukuru hwekutengesa uye ndezvekuti kazhinji mari yezvezvigadzirwa zvitsva yaisungirwa kune yakati rebei mhindu, asi ikozvino uye kusvika anotevera Ndira 2020 kufarira kuri mahara kutenga.
Bhengi rinotarisira kupa mari nderenguva dzose, Cetelem. Chero zvazvingaitika sarudzo yekupa mari chigadzirwa cheApple inogara iri mumawoko emushandisi uye zvinoenderana nezvinodiwa neimwe yega, chinhu chakakosha kuve nesarudzo kubva rinenge zuva rimwe chete rekumisikidza kubvira ikozvino kune vazhinji vashandisi vari kuda kutenga uye iyi Apple inoziva mushe, saka zvirokwazvo tsika iyi inoita kubva ikozvino kwenguva refu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Zvekare tinogona kupa mari zvigadzirwa zveApple pasina mubereko
Nyowani Shinsekai Kupinda mukudzika kushambadzira, Apple Arcade